Nidaamka Isticmaalka La Aqbali karo ee WIFI ga martida
Bedelkii ugu dambeeyay: 08/06/2018
IKE SMART CITY, LLC (“Shirkadda”, “an,” ama “annaga”) waxay bixisaa shabakadda waayar laanta ee martida mudada gaaban WiFi ga ee shirkadda (the “Shabakad”). Helitaanka shabakada waxaa loo bixiyaa si xushmad leh iyo hufnaas leh adiga oo ku saleysan asaas ahaan. Isticmaalka Shabakadeena waa khatar adiga kuu gaar ah.
Nidaamka Isticmaalka La Aqbali Karo (“AUP”) ayaa xukumeysa helitaanka iyo isticmaalka Shabakada. Shirkadda waxay xaq u leedahay inay wax ka hagaajiso, kadhinto, ama wax ka bedesho shuruudaha isticmalkaaga sida ku xusan Xeerkan AUP waqti kasta. Adiga oo riixaya inaad aqbasho ama aad ogolaato AUP, waxaad aqbashay oo aad ogolaatay inaad ku xirto oo aad u hoggaansananto AUP. Haddii aadan rabin inaad ogolaato AUP, waa inaadan gelin ama isticmaalin shabakada.
Markaad isticmaalesid shabakada dadweynaha, sida Shabakaddan, waxaad qiraysaa oo aad ogolaatay waxyaabaha soo socda:
Adeegyada shabakadu ma noqon karaan kuwo aan kala go ‘lahayn ama qalad la’aan, waxaana laga yaabaa inaan xadidno muddada xiriirka shabakada;
Aaladahaga waxaa laga yaabaa inuu ku dhaco fayruusyada ama codsiyada kale ee waxyeellada leh; iyo
Xisbiyo sadexeya ee aan la ogolayn aya heli karaan faylasha kujiro aaladada ama si kaleba ula socdo xiriirkaaga.
Shabakadda waxaa lagu bixiyaa “sida” iyo “sidii la heli karo” iyada oo aan loo baahnayn wax damaanad ah. Dhammaan dadka isticmaala shabakadu waxay ku sameeyaan khatartooda. Waa inad qirsantahay hadaba ineynu damanad kaqaadeynin arimaha kusabsan amanka shabakada.
Waxaan halkan ka qaadeynaa wixii damaanad ah ee ka soo baxa sharciga ama caadooyinka, oo ay ku jiraan wixii shuruudo ah ama qarsoodi ah ee tayada qancinaya, ganacsiga, ujirnimada ujeedo gaar ah, magac iyo jebin la’aan. Waxaan sidoo kale ka qaadeynaa wixii damaanad ah iyo dammaanad qaadka iyada oo la tixgelinayo mawduuca ama adeegga, amniga, hawlgalka, awoodda, xawaaraha, shaqeynta ama awoodaha Shabakadda. Awoodenaa oo ah in aan bixinno shabakad aan lacag la’aan aheyn waxay ku saleysan tahay damaanad xaddidan, xaddidaad iyo xaddidaad mas’uuliyad gaar ah oo ku jirta AUP oo waxay noqon doontaa lacag aad u fara badan oo lagu bixiyo shabakada hadii mid ka mid ah qodobadaas aan la fulin karin
Waxaad isticmaali kartaa Shabakada kaliya ujeedooyin sharci ah iyo sida waafaqsan AUP. Waxaad ogolaatay inaadan adeegsan shabakada:
Si kasta oo jebisa shuruucda federaalka, gobolka, degaanka, ama caalamiga ah ama shuruucda caalamiga ah (oo ay ka mid tahay, aan xadidnayn, shuruuc kasta oo ku saabsan dhoofinta xogta ama software-ka iyo ka timid Maraykanka ama dalalka kale).
Ujeedada laga faa’iidaysto, waxyeelleynta, ama isku dayidda in la istcimaalo ama la waxyeeleeyo, ilmo kasta si kasta ha ahaato iyaga oo u soo bandhigaya waxyaabaha aan habooneyn, waydiinta macluumaad shakhsi ahaan lagu aqoonsan karo, ama haddii kale.
Si aad u soo dirto, si aad u hesho, sameyso, soo dejiso, u isticmaasho, ama dib u isticmaasho wax kasta oo ku xad gudbaya xuquuqda qof kasta ama qof kasta oo ka shaqeeya meel kasta oo ka mid ah xukunka.
Si loo gudbiyo, ama loo soo gudbiyo diritaanka, wax kasta oo xayaysiis ama xayaysiinta dallacsiinta, oo ay ku jiraan “mail mail”, “warqad silsilad”, “spam,” ama wixii kale ee la mid ah oo la mid ah.
Si aad iskagadhigtid ama isku daydo inaad iskadhigtid Shirkadda, Shaqaalaha Shirkadda, qof kale oo isticmaala, ama qof kasta ama cid kale (oo ay ku jirto, aan xadidnayn, adoo isticmaalaya cinwaannada e-mailka ama magacyada sawirrada ee la xidhiidha mid kasta oo ka mid ah kuwa kor ku qoran).
Si ay ula falgalaan wax kasta oo kale oo xayiraya ama joojiya isticmaalka ama isticmaalka shabakada, ama, sida, annaga na go’aan, waxay waxyeelayn karaan Shirkadda ama isticmaalayaasha shabakada ama waxay kushacin karta qasaroyin Intaa waxaa dheer, waxaad ku raacsan tahay inaadan:
Isticmaalin Shabakada si kasta oo halayn karta, culeys saarayo (sida fidinta video ama content), waxyeelo, ama halayn ah shabakad ama faragalinayso cid kasta oo isticmaala Shabakada, oo ay ku jirto awooddooda inay ku lug yeeshaan dhacdooyinka dhabta ah ee loo marayo Shabakada .
Isticmaal wax kasta oo robot, caaro, ama qalab kale oo gawaarida ah, habka, ama habka lagu galo shabakad ujeeddo kasta, oo ay ku jiraan kormeerida ama nuqul ka mid ah gaadiidka shabakada ama ilaha laga heli karo Shabakadda.
Isticmaal nidaam kasta oo gacanta ku haya si loola socdo ama nuqulo gaadiidka shabakada ama ilaha laga heli karo Shabakada ama ujeedooyinka kale ee aan la fasaxin iyadoon oggolaansho qoraal ah oo hore ah.
Isticmaal aalad, software, ama nidaam kasta oo farageliya shaqada habboon ee shabakadda.
Soo bandhig fayrusyada, fardaha gawaarida, qoryaha, bambooyin macquul ah, ama software ama qalab kale oo khaas ah ama tiknoloji ahaan waxyeello leh.
Isku day inaad hesho galmo aan la oggolayn, faragelin, waxyeelo, ama carqalado qaybo ka mid ah Shabakada ama server kasta, kombiyuutar, xogta, ama khayraad kale ama shey kale oo ku xiran Shabakada.
Ku xad gudub, isku day inaad ku xad gudubto, ama si ula kac ah u fududeyso xad gudubka amniga ama sharafta shabakada.
Haddii kale isku day in aad farageliso shaqada saxda ah ee Shabakadda.
Waxaad ogolaatay inaadan adeegsanin shabakada si aad u dirto, si ogaal ah u hesho, sameyso, soo dejiso, u isticmaasho, ama dib ugu isticmaasho wax kasta oo:
Waxay ka kooban tahay wax kasta oo macquul ah, filiqin, ficil, cayda, xadgudubka, dhibaataynta, rabshadaha, nacaybka, carbinta, ama wax kale oo aan caqli gal ahayn.
Waxay dhiirigelisaa galmo cad ama qaawan oo galmo ah, rabshad, ama takoorid ku salaysan jinsi, jinsi, diin, jinsiyad, naafonimo, jihada galmada, ama da’da.
Wax ka gaabiya wixii shati ah, calaamad ganacsi, qarsoodi ganacsi, xuquuqda daabacaada, ama hantida kale ee fikradaha ama xuquuqda kale ee qof kasta.
Xadgudubka xuquuqda sharciga (oo ay ku jiraan xuquuqda bandhigyada iyo asturnaanta) kuwa kale ama waxay ka kooban yihiin wax kasta oo keenaya in ay soo baxaan masuuliyad madani ah ama dambiile ah sharciyada iyo sharciyada..
Waxay u badan tahay inad khiyaanayso qof kasta.
Waxay dhiirrigelisaa waxqabadyo sharci darro ah, ama u doodayaal, dhiirrigeliya, ama gacan ka geystaan wax sharci daro ah.
Waxay sababtaa dhibka, dhibka, ama walaac la’aanta ama waxay u badan tahay inay murugo, ceeb tahay, digniin, ama xanaaqa qof kale.
Iskadhigida shaqsi kale, ama been-kasheegeya aqoonsigaaga ama ku-xirnaanta qof ama urur.
Waxay ku lug leedahay waxqabadyada ganacsiga ama iibka, sida tartamada, riwaayadaha, iyo dalladaha iibka ee kale, barter, ama xayeesiin.
Waxay siisaa fikradda ah inay ka soo baxaan ama ay naga taageeraan annaga ama qof kasta oo kale ama xubin, haddii aysan kiisku ahayn.
DABAGALKA IYO SUGIDA
Shirkadda, waxay ku saleysan tahay go’aankeeda, waxay go’aamin doontaa in dhaqankaagu yahay mid waafaqsan Xeerkan AUP. Waxaan xaq u leenahay inaanu kormeerno adeegsiga shabakada oo aan qaadno ficil kasta oo aan u baahannahay ama aan ku haboonayn go’aankayaga kali ah haddii aan aamminsannahay in dhaqankaaga uu ku xad gudbay AUP, oo ay ka mid tahay, iyada oo aan xaddidid u gudbin sharci fulin iyo xaq u lahaanshaha iskaashiga baaritaan kasta, iyo xaqa aad u leedahay inaad joojiso ama aad ka shakiso inaad heli karto dhammaan ama qeyb ka mid ah Shabakadda.
WAXAAD WAALID IYO HOLDI KA HELI KARTAA SHIRKADDA IYO WAXQABADAHA, LICHIIMAHA IYO ADEEGAHA ADEEGAHA LAGA HELI KARTAA SHARCIYEYAASHA LAGA HELAY CIIDAMADA AMA CIYAARAHA SHARCIYEYSIGA LOO BAAHAN YAHAY, AMA LAGU DHAMAYO, WAXYAABAHA KA QAADASHO, KA HELI KARTA, SHAQAALAHA, DHIBAATOOYIN AMA SHARCIYADA HESHIISKA SHARCIYADA.